July 8, 2019 - CeleLove
ယခုနှစ် ဘဝတစ်ဆစ်ချိုး ပြောင်းလဲမယ့် တနင်္လာ ဗုဒ္ဓဟူး အင်္ဂါ စနေ သားသမီး များဖတ်ရန်
July 8, 2019 Cele Love 0
ယခုနှစ် ဘဝတစ်ဆစ်ချိုး ပြောင်းလဲမယ့် တနင်္လာ ဗုဒ္ဓဟူး အင်္ဂါ စနေ သားသမီး များဖတ်ရန် ” ဗုဒ္ဓဟူး ” ( ဗုဒ္ဓဟူးသားသမီးများ စုတ်ရော စန်းပါပွင့်ကာ အိမ်ထောင်ကျကိန်း ရှိအံ့ သားသမီးရတာ ထွန်းကားအံ့ ရွေရော ငွေရော ဝင်ကာ မြဲအံ့ အလှူအတန်းများ […]
ကျမကလေးတွေဘက်က မဟုတ်ဘူးဆိုရင်လည်း ကလေးသူငယ်အနေနဲ့ ပြန်လည်ရပ်တည်ပေးပါလို့ ကျမ အနူးအညွတ် တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ရှင်”
ကျမကလေးတွေဘက်က မဟုတ်ဘူးဆိုရင်လည်း ကလေးသူငယ်အနေနဲ့ ပြန်လည်ရပ်တည်ပေးပါလို့ ကျမ အနူးအညွတ် တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ရှင်” “ကျမကလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ မိဘတစ်ယောက်အနေနဲ့ တအားခံစားရပါတယ်။ ပြည်သူကိုလည်း ကျမအပ်ပါတယ် …။ ကျမ ကလေးတွေကို မှန်ကန်တဲ့ DNA စစ်ချင်တယ်ဆိုရင်လည်း ကျမ ခွင့်ပြုပါတယ် …။ ကျမကလေးတွေဘက်ကနေ မဟုတ်ဘူးဆိုရင်လည်း အမှန်တရားကို ပြန်လည် […]
လူစားထိုးခံရမှုဟု ယုံကြည်​ရ​သော WISDOM HILL သက်​ငယ်​မုဒိန်းမှုအတွက်​ သမ္မတထံတင်​ပြရန်​ အချက်​အလက်​များ ရှိနေပြီ ဟုဆို
လူစားထိုးခံရမှုဟု ယုံကြည်​ရ​သော WISDOM HILL သက်​ငယ်​မုဒိန်းမှုအတွက်​ သမ္မတထံတင်​ပြရန်​ အချက်​အလက်​များ ရှိနေပြီ ဟုဆို လူစားထိုးခံရမှုဟု ယုံကြည်​ရ​သော wisdom hill သက်​ငယ်​မုဒိန်းမှုအတွက်​ သမ္မတထံတင်​ပြရန်​ အချက်​အလက်​ 75% ရှိ​နေ ပြီလို့ ဆိုပါတယ် …။ ဆိုင်ဘာရဲကအစ (ယာဉ်မောင်း) လို့ တလုံးထဲ […]
” အိပ်ပျော်နေရာမှ ရုပ်တရက်ထလိုက်ခြင်း၏ ကြောက်မက်ဖွယ်ဆိုးကျိုး “
” အိပ်ပျော်နေရာမှ ရုပ်တရက်ထလိုက်ခြင်း၏ ကြောက်မက်ဖွယ်ဆိုးကျိုး “ အိပ်ပျော်နေပြီးမှ ရုတ်တရက် ထလိုက်ခြင်းဟာ လူကိုသေစေနိုင်တယ်ဆိုတာ (အိပ်ယာအထမှာလိုက်နာစရာ) အိပ်နေရင်းဘာလို့ သေကြတာလဲ??? အားလုံး အတွက်​ အ​ရေးကြီးလို့ မိတ်​​ဆွေ ဆရာဝန်​တစ်​​ယောက်​ ​ပြောပြထားတဲ့ ​ဟောဒီအချက်​​လေးကို သတိထားကြဖို့ မျှဝေပါရ​စေ နော် …။ ည ည […]
ကားမောင်းသမားအိပ်ငိုက်သွားတဲ့အခါ များသောအားဖြင့် ကားစီးတဲ့အခါ ရှေ့ခန်းမှာထိုင်တဲ့ သူနဲ့ ယာဉ်မောင်းတို့ကသာ ထိုင်ခုံခါးပတ် ပတ်လေ့ရှိကြပါတယ်။ နောက်ခန်းမှာ ထိုင်သူတွေကတော့ ခါးပတ်ပတ်ဖို့ မလိုဘူးလို့ အမှတ်မှားနေကြတဲ့ သူတွေက များပါတယ် …။ ပုံမှန် ဆလွန်းကားတစ်စီးမှာဆိုရင် ထိုင်ခုံခါးပတ် ၅ ခု ပါလေ့ရှိပြီး ယာဉ်ပေါ် လိုက်ပါလာသူအားလုံးက ခါးပတ်ပတ်ဖို့ […]
တစ်လအတွင်းမှာ တင်ပါးလေးကို လုံးဝန်းကျစ်လစ်သွားစေမယ့် လေ့ကျင့်ခန်း (၅)မျိုး ပျိုမေတို့ တင်ပါးလေးတွေ လှဖို့ ထိုင်ထလေ့ကျင့်ခန်းတစ်မျိုးပဲ လုပ်လို့ရတယ်လို့ မထင်ပါနဲ့နော်။ ထိုင်ထလုပ်ရတာ မကြိုက်တဲ့သူလေးတွေအတွက် တင်ပါးလေးတွေ လုံးဝန်းကျစ်လစ်လှပဖို့ လေ့ကျင့်ခန်းလွယ်လွယ်လေးတွေ ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်နော် …. လေ့ကျင့်ခန်း (၁) ပုံထဲကလို လက်ဝါး၊ ဒူးနဲ့ ခြေဖမိုးတွေ ကြမ်းပြင်မှာ […]
ဆရာမနှင်းနုလိုပဲ အမှန်တရားကို အကုန်သိတယ်ဆိုပီးဖြစ်စဉ်အကြောင်း ပြောပြလာတဲ့ သူတစ်ယောက်
ဆရာမနှင်းနုလိုပဲ အမှန်တရားကို အကုန်သိတယ်ဆိုပီးဖြစ်စဉ်အကြောင်း ပြောပြလာတဲ့ သူတစ်ယောက် မပြောဘူး နေနေတာ ပြောလိုက်ဦးမယ် victoria လေးအတွက် ဒီမယ် ကျောင်းအုပ်ကြီး ဦးပညာ ရှင်တို့ ၂ ယောက်ပေါင်းပီး ဘယ်လိုပဲလိမ်လိမ် ကျမသိတာလေးတော့ ပြောပြလိုက်ဦးမယ် (ရှင်တို့ မထင်မှတ်တာနဲ့ ထည့်မတွက်မိတာလေးပေါ့) မနက် ကျောင်းကားဖယ်ရီလေးလာတယ် Victoria […]
(၁)တန်းကျောင်းသူလေးအား(၉)တန်းကျောင်းသားမှကာမကျင့်ကြံမှု့ဖြစ်ပွား ….. ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး ဟင်္သာတခရိုင် မြန်အောင်မြို့နယ် အင်ပင်မြို့အထကကျောင်းတွင်ပညာသင်ကြားနေသူအင်ပင်မြို့အမှတ်(၃)ရပ်ကွက်တွင်နေထိုင်နေသည့် ဒေါ် —သမီးဖြစ်သူ မ —(၁)တန်းကျောင်းသူမှာ(4-6-2019)နေ့ကျောင်းတက်နေချိန် ၎င်းမိန်းကလေးငယ် မ – –မှာတခြားမိန်းကလေးငယ်အဖော်တဦးနှင့်ကျောင်းအိမ်သာသို့သွားရာ အဖော်ဖြစ်သူမိန်းကလေးငယ်မှအရင်ပြန်နှင့်ရာ တစ်ဦးတည်းကျန်နေစဉ်တွင် (၉)တန်းကျောင်းသား တရပ်ကွက်ထဲနေဟိန်းမင်းဝေဆိုသူမှရောက်လာပြီး မိန်းကလေးငယ်အားပါးစပ်ပိတ်၍အိမ်သာထဲခေါ်ဆောင်သွားပြီး မိန်းကလေးငယ်၏မိန်းမကိုယ်နောက်ပေါက်အားကျင့််ကျန်ခဲ့သည်ကိုကျောင်းဆင်းချိန်မိန်းကလေးငယ်၏မိခင်မှကျောင်းသို့သမီးဖြစ်သူမ… အားလာရောက်ကြိုပြီးအိမ်ပြန်ရောက်ချိန်… သမီးလုပ်သူမှထမင်းစားခြင်သည်ဆို၍ထမင်းစားပြီးရေချိုရန်အဝတ်အစားချွတ်၍အိမ်သာတက်ခြင်သည်ဆိုကာအိမ်သာသွားတက်ရာမ – မှအမေရေလာပါအုံးသမီး […]
WISDOM HILL မူကြို​ကျောင်း သက်​ငယ်​မုဒိန်းမှုရဲ့ အဓိကသက်​​သေ ဆရာမနှင်းနု ​ပျောက်​ဆုံး​နေ ….. Wisdom hill က​လေးမူကြို​ကျောင်းမှာ ဖြစ်​ခဲ့တဲ့ သက်​ငယ်​မုဒိန်းမှုရဲ့ အဓိက မျက်​မြင်​သက်​​သေဟု ယူဆဏ​သော ဆရာမ​လေး နှင်းနု ​ပျောက်​ဆုံး​နေတယ်​လို့ tomorrow သတင်းဂျာနယ်​မှာ ​ဖော်​ပြထားပါတယ်​ နော် …။ အဆိုပါ […]
ဟာသလုပ်ပြီးဗီဒီယိုရိုက်ခဲ့ရာကနေ ထောင်အနှစ်(၂၀)ကျမယ့်အရေးနဲ့ရင်ဆိုင်နေရသူ ( Video)
ဟာသလုပ်ပြီးဗီဒီယိုရိုက်ခဲ့ရာကနေ ထောင်အနှစ်(၂၀)ကျမယ့်အရေးနဲ့ရင်ဆိုင်နေရသူ ( Video) အခုတလော Facebook နဲ့ Twitter မှာ တော်တော်လေးပျံ့နှံ့နေခဲ့တဲ့ ဗီဒီယိုတစ်ခုရှိပါတယ်။ အဲဒါကတော့ စူပါမားကတ်တစ်ခုမှာ အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ဟာ ရေခဲသေတ္တာထဲက ရေခဲမုန့်ဗူးတစ်ဗူးကို ယူ၊ ဖွင့်ကာ ရေခဲမုန့်မျက်နှာပြင်ကို လျှာနဲ့ကောက်လျက်လိုက်ခဲ့တာပါ။ ဒါတင်မဟုတ်သေးဘဲ အဲဒီလျှာနဲ့လျက်ပြီးသား ရေခဲမုန့်ဗူးကြီးကို အဖုံးပြန်ပိတ်ကာ မူရင်းယူခဲ့တဲ့နေရာမှာ […]